डा. को राजिनामा र प्रबन्धकको असहयोगपछि भड्किए श्रमिक - खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsडा. को राजिनामा र प्रबन्धकको असहयोगपछि भड्किए श्रमिक
July 29, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, मुख्य समाचार, सिलगढी 0
सजन शर्मा, पोख्रेबुङ, २८ जुलाई।
पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत तीन अन्तर्गत नागरी फार्म चियाबारीको स्वास्थ्य केन्द्रमा लामो अन्तरालपछि उपलब्ध गराइएको डाक्टर यजन्त गोस्वामीले कम्पनीलाई तर तीन महिना नबित्दै राजिनामा दिएपछि यहाँको स्थिति दिनभरि नै तनाउपूर्ण बन्यो।
विशेषज्ञलाई स्थायीरूपले चियाकमानमा राख्नुपर्ने माग गर्दै चिया श्रमिक अनि अन्यले बिहानदेखि अस्पताल घेराउ गरे। लोहिया टी कम्पनी ग्रूप अधिनस्थ रहेका चियाश्रमिक आफ्नो मागमा अडिग रहेर विरोध प्रदर्शन गरे।
चियाकमानको कुनै पनि विदाको अघिल्लो र पछिल्लो दिन उपस्थिति दिन नसके उक्त विदाको दिनको पनि रोज काटिने चलन रहिआएको छ। २७ जुलाईको दिन शहिद दिवसको विदा थियो। त्यसो हुँदा आज अर्थात २८ जुलाईमा काम नगरे हिजको पनि रोज काटिने निश्चित थियो।
श्रमिकहरूले रोज काटिने डर छोडेर अथवा कामगर्न छोडेर दिनभरि नै डाक्टर गोस्वामी नागरी फार्म चियाकमानमा नै रहनुपर्ने माग गर्दै धर्नामा बसे। ‘मेनेजमेण्टको नचाहिँदो दवाउको कारण राजिनामा दिएको हुँ। अस्पताल नजिको बङलोमा बस्ने व्यवस्था गरिएन। कम्पनीको अन्य सातवटा चियाकमान हेर्नुपर्ने निर्देश आयो,’ डा.गोस्वामीले भने, ‘अन्य कमानमा बिहानको सात बजी पुग्नुपर्ने निर्देंश छ। न वाहन छ न चालकको व्यवस्था। बस्ने ठाउँ टाडो छ। म सबैतिर पुग्न सक्दिन। एउटै स्वास्थ्य केन्द्रमा बसेर रोगीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्न पाउनुपर्ने हो, तर नपाइने भयो र राजिनामा दिएको हुँ।’
उनले राजिनामा दिएपछि श्रमिकहरू भड्किए। तनाउपूर्ण स्थितिलाई केन्द्र गरेर गोरामुमो, गोजमुमो, टीएमसी र जाप पार्टीका पदाधिकारीहरू पनि अस्पताल आइपुगे। महाप्रबन्धक टीसी शर्माले डा.गोस्वामीले व्यक्तिगत कारण देखाएर राजिनामा दिएको बताए।
‘डा. ले आफ्नी आमा अस्वस्थ्य रहेको कारण देखाए राजिनामा दिएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले यसो नगर्नुहोस भनेर सम्झाएकै हौं।’ महाप्रबन्धक शर्माले राजिनामा कम्पनीमा पठाएको बताए।
यता श्रमिकको मागलाई केन्द्र गरेर डाक्टरको राजिनामा स्थगनको सूचना कम्पनीमा प्रेषित गरिमाग्दा शर्माले आफूले यसो गर्न नसक्ने बताएपछि स्थिति अझ अनियन्त्रित हुन पुग्यो।
डिटिडिपिएलयुका सञ्जय गिरी,एचपीडव्ल्युका विमल प्रधान,टिएमसीका रूबेन प्रधान अनि जापका विनय लोरूङको अगुवाईमा अन्य नेतृत्वले श्रमिकको माग मान्नुपर्ने र कम्पनीमा यो सूचना पुऱ्याइदिनेबारे प्रबन्धकपक्षलाई विशेष जोड़ दिइयो।
श्रमिकवर्गको भनाइ अनुसार डाक्टर गोस्वामी आएपछि धेरै सुविधा भएको छ। स्वास्थ्य अनि यससित जोड़िएको अन्य विषयको सहुलियत र सुविधा उपभोग गर्न पाइरहेको तिनीहरूले बताए। महाप्रबन्धक शर्माले श्रमिकको भावनासित खेलवाड़ गरेको श्रमिकको आरोप थियो। सोमबार कम्पनी मालिक अशोक लोहिया आएपछि बैठक गर्ने अनि सामाधानको बाटो निकालिने बगानपक्षबाट बताइएको छ।